/blog/Gallery/Sidee Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) ay ugu shaqeyso jirdhiska jirka
Posted on 11 / 18 / 2019 by Dr. Patrick Young ku qoray Gallery.
1. Waa maxay Pyridoxal Hydrochloride?
Pyridoxal Hydrochloride ama vitamin B6 waa fiitamiin biyo lagu milmi karo oo badanaa laga helo cuntooyinka. Waxaa badanaa loo istcimaa sida kabidda cuntada.
Markii loo isticmaalo dheeri ahaan, Pyridoxal Hydrochloride way daaweyn kartaa ama ka hor tagi kartaa dhibaatooyin caafimaad oo badan. Badanaa waxaa lagu qaataa cirbad, afka ama kaabitaan cunto ah.
Hadaad tahay qof dhisa jidhka, fiitamiinkani adiga ayuu kugu habboon yahay maxaa yeelay wuxuu leeyahay howlo badan oo waxtar u leh jirka. Tusaale ahaan, waxay jirkaaga ku caawineysaa sameynta lipids, karbohaydraytyo, iyo acids amino kuwaas oo dhammaantood lagama maarmaan u ah waxqabadka jirka ee fiicnayn.
Ilaha guud ee laga helo fitamiinnada loo yaqaan 'pyridoxine hydrochloride vitamin B6' ee cuntada waxaa ka mid ah badarka, digaagga / turkey, khudradda iyo miraha.
2. Maxay bodybuilders ugu baahan yihiin fiitamiinnada - pyridoxine Hydrochloride?
Waa maxay sababta fiitamiinadu ay muhiim ugu yihiin jirdhiska? Si aad u dhammaystirto dhammaan howlaha aad qabtid maalin, waa inaad jirkaaga ku quudisaa nafaqo badan oo muhiim ah. Ku noqoshada mid ka mid ah nafaqooyinkaas ayaa sababi doonta in la jabiyo dariiqa dheef-shiidkaaga. Tani waxay horseedi doontaa hufnaan yar iyo waxqabad xumo.
Adoo ah jirdhis, waxaad ubaahantahay nafaqo ka badan kuwa hogaamiya hab nololeed dejinta. B-6 pyridoxine hydrochloride ayaa si gaar ah muhiim kuugu ah maxaa yeelay waa shuruud ku xiran phosphorylase muruq, oo ah waxqabad la xiriira metabolismka glycogen. Marka la soo koobo, waxaad u baahan tahay fiitamiin B6 oo loogu talagalay dheef-shiid kiimikaad caafimaad leh. Fiitamiin B6 wuxuu kobciyaa howlaha enzymeska ee kaqeyb gala burburka borotiinka.
Saameynta Pyridoxine hydrochloride Jirka ku jira waxbadan ayey ka qabtaan doorka ay ku leeyihiin dheef-shiid kiimikaadka. Taasi waa sababta marka aad isticmaaleyso, waxaa lagugula talinayaa inaad cuno quraac borotiin ah ka hor intaadan jimicsi dhicin. Waxa kale oo aad qaadan kartaa cuntooyinka hodanka ku ah borotiinka inta aad ku jirtid shaqada ka hor, inta aad tababarka ku jirtid, ka dib tababarka iyo ka hor intaadan jiifka seexan.
Si kastaba ha noqotee, tani micnaheedu maahan inaad iska indha tireyso cuntooyinka kale. Jirkaagu wuxuu ubaahanyahay macdano kale oo aad muhiim u ah si ay sifiican ugu shaqeeyaan oo ay kaa badbaadiyaan cudurada.
3. Waa maxay saamaynta Pyridoxine Hydrochloride sida fiitamiin ku habboon taam ahaanshaha?
Sababta aad ugu baahan tahay inaad qaadato qadar ku filan oo ah B6 ayaa ah iyada oo wax badan ku biirinaysa fal-gallada kiimikada badan ee ku lug leh amino acids iyo borotiinnada.
Dhisme ahaan, waxaad ugubaahantahay qaab dhismeedkaaga unugyada cas. Waa inaad sare u qaaddaa unugyadaada casaanka si aad u maamusho biyo-u-haynta biyaha oo aad u hubiso in jirkaagu helo oksijiin ku filan.
Sababta kale ee aad ugu baahan tahay B6 waa in ay wanaajiso heerkaaga iska caabbinta walaaca. B6 waxay ka dhigeysaa macdanta birta cuntadaada inay aad u badantahay. Muruqyadaadu waxay u baahan yihiin bir badan iyo haemoglobin (oksijiin) si ay u adkeystaan ​​walaaca.
Waxaad sidoo kale u baahan tahay tamar badan inta lagu jiro shaqada. Pyridoxine hydrochloride waxay faa'iido u leedahay jirkaaga iyadoo kordhineysa heerka gubashada karbohaydraytyada ku dhex jira unugyadaada. Tani waxay hubineysaa inaad hesho tamar kugu filan.
Inta lagu gudajiro tababarka, walwal ayaa ka jira habka wax soo saarka tamarta ee jirkaaga. Waxaa sidoo kale isbeddelo ku imaan doona unugyada jirkaaga ee ka yimaada howlaha culus. Intaa waxaa sii dheer, waxaad waayi doontaa tiro badan oo nafaqooyin ah saxarada, kaadida, iyo dhididka sababta oo ah dheef-shiid kiimikaadka oo kordha.
Sababahan dartood, waxaad u baahan doontaa inaad buuxiso nafaqada jirkaaga. Tan waxaad ku samayn kartaa adoo qaadanaya kaabayaal si aad u dayactirto una dayactirto tirada cadkaaga. Tani waxay hubin doontaa in unugyadaadu ay noqdaan kuwo jilicsan oo xoog leh. Ma jiro wax kaabis ah oo ka wanaagsan oo ah fiitamiin 'pyridoxine hydrochloride' B6 marka aad rabto inaad dib u dhisto muruqyada jirkaaga.
4. Taariikhda Pyridoxal Hydrochloride
Pyridoxal Hydrochloride (65-22-5) waxaa markii hore lagu sameeyay 1939 laakiin waxaa laga helay 1934. Soo helitaankan waxaa sameeyay Paul Gyorgy, oo ah dhakhtar u dhashay wadanka hangari. Wuxuu u magacaabay fitamiin B6 wuxuuna u adeegsaday inuu ku daweeyo cudurka loo yaqaan 'dermatitis acrodynia', oo ah maqaarka ku jira jiirka.
Shan sano kadib markii la helay, saynisyahan kale, Samuel Lepkovsky wuxuu ku guuleystey inuu ka sooco buugga bariiska si uu u helo budada pyridoxine hydrochloride.
1939, Folkers iyo Harris waxay go'aamiyeen qaabdhismeedka pyridoxine. Lix sano kadib, Snell wuxuu muujiyey in B6 ay leedahay labo qaab: pyridoxamine iyo pyridoxal. Magaca Pyridoxal Hydrochloride wuxuu ku saabsanaa sababta oo ah fitamiin B6 wuxuu qaab ahaan iskumid u ahaa Pyridine.
Maanta, Ururka Caafimaadka Adduunka waxaa ku jiraPyridoxal Hydrochloride liistada Daawooyinka Muhiimka ah. Tan maxaa yeelay waxay u tixgeliyaan inay ka mid yihiin daawooyinka ugu ammaansan uguna waxtarka badan ee looga baahan yahay nidaamyada caafimaadka. Waxaa lagu heli karaa miiska farmashiyaha iyo dawo guud.
5. Qiyaasta Pyridoxal Hydrochloride ee jirdhiska jirka
Ka mid ah fiitamiinnada-B, Pyridoxal Hydrochloride ayaa ah tan ugu muhiimsan caafimaadka jirka iyo maskaxda ee dhismayaasha jirka. Waxay caawineysaa koritaanka unugyada cusub, iyagoo sharraxaya Pyridoxine hydrochloride bodybuilding karti. B6 sidoo kale waxay caawineysaa isku-dheellitirka potassium iyo sodium, iyo soo-saarka aashitada nukliyeerka, DNA iyo RNA oo iyana qayb ka ah.
Haweenku waxay u isticmaali karaan inay isku dheelitiraan hormoonnada isla markaana ka caawiyaan ka hortagga xasillinta xilliga uurka. Waxay kaloo la dagaallameysaa haynta dheecaanka dhiigga ee haweenka ka hor waxayna yareysaa xanuunka caadada iyo finanka.
Yaraanta Pyridoxal Hydrochloride waxay keenaysaa xanaaq, xanaaq, hurdo la’aan, tabar yari, carrabka oo xannuunsan, ciddiyaha kacsan, arthritis, iyo osteoporosis.
Qiyaasta lagu taliyey ee FDA waa 2mg, laakiin leh kaabis, qiyaasta caadiga ah waa 20mg. Pyridoxal Hydrochloride waxay noqon kartaa sun ah markii aad qaadato wax ka badan 2000mg.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay hal daraasad, qiyaasta Pyridoxal Hydrochloride ee hadda lagula taliyay shaqsiyaadka firfircoon ee Dowladda Mareykanka ma ahan mid ku filan.
Tan macnaheedu waa kuwa xaddidaya kooxaha cuntada ama xaddidaya kalooriyeyaasha waxaa laga yaabaa inay ku jiraan halis qatar. Sidaa daraadeed, lagama yaabo inay ka faa'iideystaan ​​saameynta pyridoxine hydrochloride haddii ay kaliya qaataan qiyaasta dawladu ku taliso.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka daraasaddan, waxaa caqli gal ah in la tashto khabiirkaaga daryeelka caafimaadka si lagaaga caawiyo go'aaminta qiyaasta ugu fiican / kufilan ee loo yaqaan 'pyridoxine hydrochloride bodybuilding your adiga'.
6. Isticmaalka Pyridoxal Hydrochloride
Ma jiro yaraanta daran ee fitamiin B6 gudaha Mareykanka, laakiin waxay u badan tahay waayeelka iyo carruurta. Haddii aad la xanuunsaneyso xaaladaha sida hyperthyroidism, cudurka celiac, cudurka loo yaqaan autoimmune, cudurka kelyaha, ama aad ku tiirsantahay aalkolo markaa waxaad halis ugu jirtaa inaad la kulanto yaraanta fitamiin B6.
Jidhku ma soo saari karo fiitamiin B6, marka waa inaad ka heshaa kaabis ama cuntooyin. Waa lagama maarmaan in la isticmaalo xaddi fiitamiin ah oo ku filan oo lagu daaweeyo lagana hortago cudurrada dabadheeraad ah iyo caafimaad wanaagsan.
Halkan waxaa ah sagaal adeegyo caafimaad oo ay sayniska ku taageereen pyridoxine hydrochloride:
(1) Waxay yareyneysaa calaamadaha buufiska waxayna wanaajisaa niyadda
B-6 pyridoxine hydrochloride Waxay door muhiim ah ka ciyaaraysaa hagaajinta niyadda. Tani waa sababta oo ah waxay abuurtaa neurotransmitters-ka xakameeya shucuurta. Pyridoxine hydrochloride ee uurka waa mid aad muhiim ugu ah dumarka dareen ahaan qaba ama leh xaalad kacsan oo ay keento isu dheelitir la'aanta hormoonnada xilliga uurka.
B6 ayaa sidoo kale yareynaysa heerarka dhiigga ee iswada, asiin amino acid oo mas'uul ka ah dhibaatooyinka maskaxda sida diiqadda. Daraasado badan ayaa leh astaamo niyadjab leh oo leh heerar hooseeya oo ah maadada loo yaqaan 'pyridoxine hydrochloride' ee dhiiga.
(2) Waxay yareysaa khatarta Alzheimer waxayna kobcisaa Caafimaadka Maskaxda
Vitamin B6 waxaa lagu yaqaanay doorkeeda hormarinta shaqada maskaxda iyo ka hortagga cudurka Alzheimer. Waxay hoos u dhigtaa heerarka 'iswada' ee dhiigga sidaa daraadeedna waxay yareysaa khatarta yaraanta xusuusta iyo cudurka Alzheimers.
Hal daraasad oo ku lug leh dadka waaweyn ee 156 oo leh cillad xagga garaadka ah oo hooseeya iyo heerka heerka iswada ee heerarka dhiigga ayaa ogaaday in qiyaasta sare ee loo yaqaan 'pyridoxine hydrochloride qiyaasta' ay hoos u dhigto heerarka homocysteine ​​ee dhiigga sidoo kale waxay yareysaa burburka qaybo ka mid ah maskaxda oo halis ugu jira cudurka Alzheimers.
(3) Waxay ka hortagtaa oo daweysaa dhiig kabuubyo
Fiitamiin B6 wuxuu ka hortagaa oo la daaweeyaa dhiig yaraanta taas oo ay keento yaraanta. Tani waa sababta oo ah waxay door ka ciyaaraysa soo saarka haemoglobin. Haemoglobin wuxuu gaarsiiyaa oksijiinta unugyada jirka. Hemoglobin hooseeya, unugyadaada ma heli doonaan oksijiin ku filan taas darteedna, waxaad ku qaadi doontaa dhiig yaraan waxaadna dareemeysaa daal ama daciifnimo.
Heerarka hooseeya ee fiitamiin B6 ayaa lala xiriiriyay dhiig yaraan, gaar ahaan dumarka ay da'doodu dhasho ama kuwa uurka leh.
(4) Waxay daweysaa calaamadaha cudurka 'premenstrual Syndrome' (PMS)
Mid ka mid ah faa'iidooyinka hydrocloride-ka loo yaqaan 'pyridoxine hydrochloride' waa in loo istcimaali karo in lagu daaweeyo calaamadaha cudurka 'PMS' oo ay ka mid yihiin xanaaq, diiqad, iyo walwal. Baarayaasha waxay rumeysan yihiin in fiitamiin B6 uu daaweyn karo calaamadahan sababtoo ah wuxuu abuuraa dareemayaasha neerfaha ee ka caawiya habaynta niyadda.
Hal daraasad yar, waxaa lagu ogaaday in astaamaha PMS ay ka mid yihiin walwal, xanaaq, iyo isbeddelo niyadda si weyn ayaa loo yarayn karaa iyadoo la qaadanayo 200mg ee magnesium oo ay weheliso 50mg ee fiitamiin B6 maalintii.
(5) Waxay daweysaa lallabbo xilliga uurka
Tobannaan sano, fiitamiin B6 waxaa loo isticmaalay daaweynta lallabbo iyo matagida haweenka uurka leh. Waxa kale oo ay ka kooban tahay Diclegis, oo ah dawo loo isticmaalo daaweynta jirrooyinka subaxnimada. Tani waxay ka mid tahay faa'iidooyinka ugu sarreeya ee loo yaqaan 'pyridoxine hydrochloride' ee loogu talagalay haweenka ku dhaca xaaladdan inta ay uurka leeyihiin.
Qiyaasta saxda ah ee loo yaqaan "pyridoxine hydrochloride" ee uurka waxay ku kala duwantahay qof ilaa qof. Daraasad la xiriirta haweenka uurka leh ee 342 ayaa ogaatay in qiyaasta maalin kasta ah ee 30mg ee fiitamiinku ay si la yaab leh hoos ugu dhigtay dareenkooda lallabbo shan maalmood uun ka dib bilowga daaweynta
Daraasad kale oo ku lug leh haweenka uurka leh ee 126, marxaladaha lallabbo iyo matag ayaa si weyn hoos loogu dhigay iyadoo la qaadanayo 75mg of vitamin B6 maalin kasta. Astaamaha ayaa hoos u dhacay 41% afar maalmood ka dib oo muujinaya waxtarka pyridoxine hydrochloride ee uurka.
(6) Waxay yareyneysaa Halista cudurka Wadnaha iyadoo laga hortago halbowlayaasha xidhma
Pyridoxine hydrochloride waxay door weyn ka ciyaartaa ka hortagga xidhitaanka halbowlayaasha sidaasna yareynaya halista cudurka wadnaha. Haddii aad leedahay heerar hooseeya fiitamiin B6, halista aad u leedahay inaad ku dhacdo cudurka wadnaha ayaa ku dhawaad ​​labanlaab marka la barbar dhigo kuwa heerarka caadiga ah ee fiitamiinada dhiigga ku jirta. Fiitamiin B6 wuxuu yareeyaa fursadaha xididdada halbowlayaasha isagoo yareynaayo heerarka iswada.
Hal daraasad oo ku lug leh jiirka oo ku yaraa fiitamiin B6, ayaa la ogaaday inay leeyihiin heerar sare oo kolesterool ah oo iyaguna ay soo saareen nabaro. Kuwani waxay u badan tahay inay sababaan xannibaadyada halbowlaha halista haddii ay dhacdo inuu ku dhaco isku-jirka 'homocysteine'. Cilmi-baarisyada qaarkood oo ku lug leh aadanaha ayaa sidoo kale muujiyay in fiitamiin B6 uu ka hortagi karo cudurrada wadnaha.
(7) Waxay kaa caawineysaa kahortaga kansarka
Tani waa laga yaabaa inay tahay tan ugu muhiimsan isticmaalka 'pyridoxine hydrochloride' ayaa la bixiyaa faafitaanka kansarka maanta. Haddii aad qaadaneysid Pyridoxine hydrochloride oo kugu filan, halista aad u leedahay inaad ku soo baxdo noocyo kansar ah ayaa hoos loo dhigi doonaa. Sababta tan waa mid aan caddayn laakiin cilmi baarayaashu waxay rumeysan yihiin inay la xiriirto awoodda B6 si loola dagaallamo caabuqa sababa xaaladaha dabadheer sida kansarka.
Kadib dib-u-eegista daraasadaha 12, cilmi-baarayaashu qaar waxay soo gabagabeeyeen in heerar dhiig oo ku filan B6 ay la xiriiraan halista hoose ee kansarka maqaarka. Haddii aad leedahay heerar sare oo B6, fursadahaaga aad ku qaadi karto kansarka mindhicirka waxaad hoos u dhigi doontaa 50% marka loo eego kuwa leh heerar hooseeya B6.
Cilmi baaris gaar ah ayaa la sameeyay si loo go'aamiyo xiriirka ka dhexeeya heerarka pyridoxine hydrochloride iyo kansarka naasaha, waxaa la ogaaday in heerar ku filan oo ah B6 ee dhiiga ay hoos u dhigto halista kansarka naasaha, gaar ahaan haweenka postmenopausal.
(8) Waxay ka hortagtaa Cudurada indhaha waxayna kobcisaa caafimaadka indhaha
Fiitamiin B6 wuxuu caawiyaa kahortaga cudurada indhaha, gaar ahaan kuwa la xiriira da'da gabowga-xumaanta jirka ee jirka (AMD). Markaad yeelato heerar sare oo ah isutagga 'homocysteine' ee ku qulqulaya dhiigaaga, waxaad halis badan ugu jirtaa inaad ku dhacdo AMD. Pyridoxine hydrochloride waxay ka caawineysaa yareynta heerarka sare ee iswada ee dhiigga ee sidaa awgeed hoos u dhigidda halista AMD.
Marka loo eego hal daraasad oo lagu sameeyay wax kabadan dheddigga 5,000, waxaa la ogaaday in qiyaasta maalin kasta ee fiitamiin B6 ay weheliso fiitamiin B12 iyo folic acid waxay yareysaa halista AMD illaa iyo 40%, marka la barbar dhigo kuwa aan qaadanin fiitamiinnada.
Cilmi-baaris kale waxay kuxirtay dhibaatooyinka indhaha isha heerarka hoose ee dhiigga; gaar ahaan dhibaatooyinka indhaha ee u horseedaya xididdada xididdada ku xiran qaybta dambe ee isha. Heer hoose oo ah pyridoxine hydrochloride ayaa sidoo kale lala xiriiriyay ciladaha xuubka maskaxda.
(9) Waxay daaweynayaan Cudurka Rheumatoid Arthritis
Haddii aad la xanuunsaneyso Rheumatoid Arthritis Inflam inflammatation, qaadashada B6 waxay kaa caawin kartaa yareynta xanuunkaaga. Cudurka arthritis-ka laftiisa ayaa hoos u dhiga heerarka B6 ee jirka waxaana loo baahan yahay in heerkan la saxo.
Daraasad lagu sameeyay dadka waaweyn ee 43 ayaa ogaatay in qiyaasta maalinlaha ah ee isku darka 5mg ee folic acid iyo 100mg of B6 ay si weyn hoos ugu dhigtay heerka molikulaasyada ku dhaca jirkooda kadib usbuucyadii 12.
7. Waxyeelooyinka Pyridoxal Hydrochloride
Pyridoxine hydrochloride ayaa amaan u leh isticmaalka jir-dhiska. Sidoo kale nabadgalyo u leh isticmaalka caafimaad. Si kastaba ha noqotee, waxay ku leedahay saameyn kaladuwan dadyow kala duwan Qaar ka mid ah waxyeelooyinka daawada pyridoxine hydrochloride waxaa ka mid ah:
Calaamadaha ficil-celinta xasaasiyadda sida neefsashada oo dhib ku ah, furuuruc, bushimahaaga oo barara, wejiga, cunaha ama carrabka
Dareemida dareenka gariirka, heerkulka, iyo taabashada
Dareemida daal ama cidhiidhyo gacmahaaga
Isu-duwidda ama isu-dheellitirka
Kabuubyo fudud ama feedh, feedh ama dareen gubasho cagaha iyo gacmaha
Af - ka-qaad afka ama lugahaaga
Dareenka ku dhaca iftiinka qorraxda
Haddii aad la kulanto waxyeelada daran ee pyridoxine hydrochloride markaa waxaa kuu fiicnaan laheyd inaad raadiso daryeel caafimaad.
8. Waa maxay digniinta iyo taxadarka Pyridoxal Hydrochloride?
Qiyaasta aad u sarreysa ee Pyridoxal Hydrochloride waxay sababi kartaa cilado neerfayaasha. Dhibaatooyinkan ayaa laga yaabaa, inayna, u horseedaan dhibaatooyinka xasilloonida iyo luminta dareenka lugaha. Waxa kale oo jira warbixino qaarkood oo sheegaya qiyaaso aad u sarreeya pyridoxine hydrochloride waxay u horseedi kartaa jawaab celin maqaarka. Nasiib wanaagse, markii aad joojisid qaadashada qiyaasta sare, si buuxda ayaad uga soo kaban doontaa.
Waxaa lagugula talinayaa inaadan qaadan qiyaasta daawada ee sarreysa inta aad uurka leedahay. Kaliya dhakhtar aqoon u leh ayaa go'aamin kara qiyaasta Pyridoxine hydrochloride ee uurka. Sidoo kale ogsoonow inaad tahay dhisme-dhisme iyo haddii kale, waa inaadan qaadan wax ka badan 100mg oo ah pyridoxine hydrochloride maalin kasta ilaa aad kala hadasho daryeel caafimaad bixiyahaaga.
Markaad kujirto dawada Pyridoxal Hydrochloride, waa inaadan joojin, bilaabin isticmaalkeeda marka lagu daro daawo kale, ama aad badasho qiyaasta adigoon ogolaan bixiyahaaga daryeelka caafimaadka.
In kasta oo Pyridoxal Hydrochloride aysan lahayn xiriir wada jir ah oo daran ama daran oo lala yeesho daroogada kale, haddana had iyo goor way wanaagsan tahay in taxaddar la muujiyo.
Cordarone (Amiodarone) waxay kordhisaa dareenka iftiinka qorraxda marka lagu daro B6. Isku-darkaani wuxuu kordhin karaa fursadahaaga ah inaad la kulanto finanka, finanka, ama gubashada qoraxda ee meelaha maqaarkaaga soo gaadhay. Hubso inaad xirato dhar ilaalin ama sunblock-ka marka aad qaadaneyso iskudhafkan.
Jirkaagu wuxuu dumiyaa Luminal (Phenobarbital) si looga takhaluso. Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) waxay kordhisaa heerka kaas oo Luminal uu u burburayo taas oo yareynaysa waxtarka jirkaaga.
Sida Luminal, Pyridoxal hydrochloride (65-22-5) u jaba kiimikadaan si jirkaaga looga baabi'iyo. Qaadashada iskudhafka Dilantin iyo Pyridoxal Hydrochloride waxay yareyn doontaa waxtarka hore ee jirkaaga. Tani waxay kordhin kartaa fursadaha aad la kulmi doonto suuxdinta qaarkood.
Daawooyinka kale ee la macaamila Pyridoxal Hydrochloride waxaa ka mid ah:
Pyridoxal Hydrochloride waxay leedahay is dhexgal khafiif ah oo leh wax kabadan 70 daawooyin kaladuwan. Marka, ka hor intaadan isticmaalin wax dawo ah oo lagu daro, hubi inaad la xiriirto takhtarkaaga.
B6 waxay si wanaagsan ula shaqaysaa noocyada kale ee B-fiitamiinnada MCT's, CLA, zinc, sodium, potassium, magnesium, iyo vitamin C.
Faa'iidooyinka Pyridoxal Hydrochloride ee jir dhiska ayaa badan. Kaliya maaha jirdhiska jirka, qof walba oo ciyaartooy culus ah waxay u baahan yihiin inay haystaan ​​fiitamiinkan kaydsan. Si kastaba ha noqotee, waa inaad u isticmaashaa adkeyn adag oo ah cabirrada ay soo jeediyeen xirfad-yaqaannada caafimaad.
Hawlo firfircoon oo ku lug leh dhisidda jirka waxay horseedaan xiridda unugyada jirka iyo muruqyada. Waxaa ugu wanaagsan in la beddelo kuwan iyadoo la adeegsanayo kaabisyada faytamiin B6. Markaad iibsaneyso a Pyridoxal Hydrochloride wax soo saar, hubi inaad sidaas ku sameyso ilo sumcad leh sida Aasraw. Si aad u sameysato iibsi rasmi ah oo ah Pyridoxine hydrochloride, kaliya booqo aasraw.com maanta oo amar samayso.
1 Osswald, H, et al, 1987 Saameynta sodium ascorbate, menadione sodium bisulfite ama pyridoxal hydrochloride oo ku saabsan sunta iyo ficil-ka-hortagga N-methylformamide ee P 388 leukemia ama M 5076 sarcoma ee jiirarka Toxicology 43 XX PMID: 2
2 Reimer, LG, et al, 1983 Saameynta pyridoxal ee ku saabsan koritaanka nafaqada ee noocyo kala duwan oo nafaqada leh iyo bakteeriyada kale ee ku dhaca agar dhiiga Baadhitaanka microbiology iyo cudurada faafa 1 (4): 273-5 PMID: 6667606
3 Zygmunt, WA, et al, 1962 MUUQAALKA D-CYCLOSERINE INHIBITION of GRCTTH BY ALANINE Journal of bakteeriyada 84 (1): 154-6 PMID: 16561951
Sidee bay Flibanserin u Caawisaa Haweeney sida Hormoonka Jinsiga	Synephrine HCL Powder - Gubasho dufan iyo miisaan lumis Dheeri ah